RASMI: UEFA oo Ganaax dul dhigtay Sergio Ramos – Gool FM
RASMI: UEFA oo Ganaax dul dhigtay Sergio Ramos
(Europe) 28 Feb 2019. UEFA ayaa ganaax labo kulan ah dul dhigtay kabtanka kooxda Real Madrid kaddib Jaalihii uu sida ula kaca ah u qaatay kulankii lugta hore ee wareega 16-ka Champions League ay Real Madrid ka adkaatay Ajax.
Intii lagu guda jiray ciyaarta ka dhacday Amsterdam oo ay Los Blancos ku badisay 2-1 ayuu Ramos si ula kac ah u qaatay Jaale si uu u seego lugta labaad dabadeedna isagoo nadiif ah u soo laabto wareega Sideed dhamamadka.
UEFA oo baaris ku bilaabay horaantii usbuucan ayaa iminka si rasmi ah ganaax labo kulan ah dusha u saariyay Ramos.
“Ramos waxaa la ganaaxi doonaa labo kulan kaddib kaarkii uu sida ula kaca ah u qaatay,” UEFA.
Gareth Bale oo mar walba inkaari ka haysato dhanka Barcelona
HORDHAC : Tottenham VS Arsenal ? xogta kulanka iyo xaqiiqooyinka laga diwaan giliyey.